Amanqaku kaHritusharma kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Hritusharma
I-Hritusharma ibhlog ye-freelancer, egxile kubugcisa bokuyila kunye neeapps zoyilo. Uzimisele ukunceda wonke umntu ukuba abe ngumyili njenge pro. Ngaphandle kokuba yi-tech junkie, uHritusharma uthanda ukwenza ividiyo kunye nokufota.
Isikhokelo kwiindidi kunye nezixhobo zokuqalisa ukwenza iikhosi zevidiyo ezikwi-Intanethi
NgeCawa, ngo-Epreli 11, 2021 Lwesine, Disemba 30, 2021 Hritusharma
Ukuba ufuna ukwenza isifundo kwi-intanethi okanye ikhosi yevidiyo kwaye ufuna uluhlu olusebenzayo lwazo zonke izixhobo ezingcono kunye nezicwangciso, ke uya kusithanda esi sikhokelo. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndiphande ndaza ndazivavanya izixhobo ezininzi, izixhobo zekhompyutha kunye neengcebiso zokwenza izifundo eziphumelelayo kunye nezifundo zevidiyo zokuthengisa kwi-intanethi. Kwaye ngoku ungaluhluza olu luhlu ukufumana ngokukhawuleza eyona nto uyifunayo (kukho into